တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: အမေရိကန် သမ္မတ ဘရက် အိုဘားမားရဲ့ မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက်
အမေရိကန် သမ္မတ ဘရက် အိုဘားမားရဲ့ မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက်
I came here because of my respectful this University. He was here at the school where opposition colonial Rule. First of all, He was here that Aung San, editor of Magazine before leading to the independent movement.
He was here that U Thant learn the way of the world before guiding it at the United Nation.
နယ်ချဲ့ ကိုလိုနီ စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ သူဟာ ဒီရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ ပညာသင် နေထိုင်သွားခဲ့သလို မြန်မာ့ လွပ်လပ်ရေး ခေါင်းဆောင် မဖြစ်ခင်က မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ လုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့ သူဟာ ဒီနေရာမှာ နေထိုင်သွားခဲ့တယ်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှာ ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ခင်တုန်းက ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အကြောင်းအရာ နည်းလမ်းတွေကို သင်ကြားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်ဆိုတဲ့ သူဟာ ဒီနေရာမှာပဲ ပညာသင်ရင်း နေထိုင်သွားခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော် လေးစားသောအားဖြင့် ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကို ကျွန်တော် ရောက်လာခဲ့တာပါ။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 9:45 AM
Labels: News, မူလစာမျက်နှာ, အဆိုအမိန့်